Global Voices teny Malagasy » Fikaroham-bola Ho An’ny Horonantsary Fanadihadiana Mikasika Ilay Vehivavy Mainty Voalohany Solombavambahoaka Tao Brezila · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 04 Avrily 2016 12:57 GMT 1	 · Mpanoratra Fernanda Canofre Nandika (en) i Liam Anderson, Sylvia Aimée
Sokajy: Amerika Latina, Brezila, Fanabeazana, Foko sy Fiaviana, Mediam-bahoaka, Sarimihetsika, Tantara, Vehivavy sy Miralenta, Zavakanto & Kolontsaina
Sary avy ao amin'ny horonantsary Antonieta (2015). Sary: Famerenana mamoaka nahazoana alalana avy amin'ny Mangnolia Produções
Enina-amby-efapolo taona taty aorian'ny fanafoanana ny fanandevozana, Antonieta de Barros, ilay mpampianatra sady mpanao gazety no lasa vehivavy mainty hoditra voalohany mpikamban'ny antenimiera tao Brezila voafidy ho solombavambahoakan'ny fanjakana tamin'ny taona 1934 tany Santa Catarina—iray amin'ireo fanjakàna ao Brezila ”anjakan'ny fotsy indrindra”. Ny taona lasa teo, natao horonantsary notontosain'ilay mpanao horonantsary, Flávia Person, ny tantaram-piainan'i Antonieta. Ankehitriny, miezaka ny misarika fanohanana ho an'ny fanaparitahana ny horonantsary i Flávia, ary miasa mba hampidirana eo anivon'ny fandaharam-pianarana ny lova navelan'i Antonieta.
Nandefa fanentanana fanangonam-bola ao amin'ny tranonkala Benfeitoria  ireo mpanantontosa ny horonantsary. Ny tanjona dia ny hanangonana R$ 22.000 (6,000 USD) mba hamatsiana vola hamokarana kapila mangirana ‘DVD’ 1.000 isa, izay ho zaraina maimaimpoana any amin'ireo sekoly, ireo anjerimanontolo, ireo trano famakiam-boky, ary ireo ivon-toerana ara-kolontsaina manerana ny Santa Catarina. Ho avy miaraka amina famariparitana am-peo ireo kapila, fandikàna amin'ny teny Libras (baiko moana Breziliana), ary dikanteny amin'ny Paortigey, Espaniola, ary Anglisy.
Tamin'ny fotoana namoahana ny horonantsary, niresaka tamin'ny Global Voices  ny tale ary nitanisa ireo antony maha-olon-tsarobidy an'i Antonieta, raha tena tsy fantatra, mpilalao ao amin'ny tantaran'i Brezila:
Toa laharam-pahamehana ho ahy ny hanao sarimihetsika momba an'i Antonieta. Taorian'ny nahafantarako fa mpampianatra izy, talen'ny ivon-toerana fanabeazana, mpahay tantara tao amin'ny gazety izan'ny malaza indndra teto amin'ny fanjakàna, no vehivavy voalohany voafidy ho solombavambahoaka tao SC, sady vehivavy mainty hoditra voalohany tao Brezila, ary izay, na izany aza, tsy nahalalan'ireo mponina tao Florianópolis ny tantarany tsara, nieritreritra aho fa izao no fotoana hanaovana sarimihetsika sady mizara ny tantarany amin'ny olona maro araka izay azo atao.
Ny fanentanana, miasa amin'ny fomba fanao ”na ho any na tsy ho any” , dia mifarana ny 12 Aprily: raha toa ka tsy tratra ny tanjona ahazoana R$ 22.000, haverina any amin'ireo mpanome ny volan'izy ireo.
Ny Martsa 2016, naseho tamina tanàna maro ao Santa Catarina ary ivelan'ny firenena i ”Antonieta”. Ilay horonantsary dia efa nanomboka sahady tany aminà tanàndehibe maro, anisan'izany Crasilia sy Rio de Janeiro.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2016/04/04/80901/
 niresaka tamin'ny Global Voices: https://pt.globalvoices.org/2015/12/14/voce-conhece-a-historia-da-primeira-deputada-negra-do-brasil/